Numeri 31 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
31 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Nea Midianfo+ yɛɛ Israelfo no, tua wɔn so ka.+ Na ɛno akyi no wubewu ma wɔasie wo akɔka wo nkurɔfo ho.”+ 3 Enti Mose ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Munyi mmarima bi mma wonsiesie wɔn ho ne Midianfo nkɔko na wɔmfa Yehowa atemmu mmra Midian so.+ 4 Munyi nnipa apem mfi Israel abusuakuw biara mu mma wɔnkɔko.” 5 Enti Israel mpempem+ mu no, woyii abusuakuw biara mu nnipa apem, na wonyaa nnipa mpem dumien a wɔasiesie wɔn ama akodi.+ 6 Na Mose de abusuakuw biara mu nnipa apem kaa ɔsɔfo Eleasar ba Finehas+ ho kɔɔ ɔko no, na na okura anwenne kronkron ne ntorobɛnto+ a wɔbɛhyɛn. 7 Afei wɔne Midianfo kɔkoe sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no, na wokunkum mmarima no nyinaa.+ 8 Wokum Midian ahene kaa wɔn a wowuwui no ho. Eyinom yɛ Midian ahene baanum+ a wɔn din ne Ewi, Rekem, Sur, Hur, ne Reba, na wɔde nkrante kum Beor ba Balaam+ nso. 9 Na Israelfo no faa Midianfo mmea ne wɔn mma nkumaa nyinaa nnommum;+ wɔfaa wɔn nguan ne wɔn nyɛmmoa a aka ne wɔn ho nneɛma nyinaa. 10 Wɔn nkurow a wɔtete mu ne wɔn nsraban nyinaa wɔde ogya hyewee.+ 11 Na wɔfaa nnipa ne mmoa a wɔwɔ hɔ nyinaa sɛ asade.+ 12 Wɔde wɔn a wɔkyeree wɔn ne nneɛma ne asade a wɔfae nyinaa baa Mose ne ɔsɔfo Eleasar ne Israel asafo no nyinaa anim wɔ Moab sare so,+ baabi a ɛbɛn Yordan wɔ Yeriko. 13 Afei Mose ne ɔsɔfo Eleasar ne asafo no mu mpanyimfo nyinaa fii adi kohyiaa wɔn wɔ nsraban no akyi. 14 Na Mose bo fuw asraafo+ mpanyimfo a wɔdeda apem apem ne ɔha ha ano a wofi akono bae no. 15 Mose bisaa wɔn sɛ: “Moakora mmea no nyinaa nkwa so anaa?+ 16 Hwɛ, wɔn na Balaam ma wɔdaadaa Israel mmarima ma wɔyɛɛ bɔne+ wɔ Yehowa ani so na ɛde ɔhaw baa Yehowa asafo+ so wɔ Peor+ no. 17 Afei munkunkum mmarimaa no nyinaa, na ɔbea biara a wada ɔbarima nkyɛn ma wafa no nso munkum no.+ 18 Na abeawa biara a onhuu barima da+ de, munnyaw no. 19 Mo de, montena nsraban no akyi nnanson. Na obiara a wakum ɔkra+ anaa waso owufo mu+ no ntew ne ho+ da a ɛto so abiɛsa ne da a ɛto so ason no, mo ne wɔn a moafa wɔn nnommum no nyinaa. 20 Na atade ne ade biara a wɔde aboa nhoma anaa abirekyi nhwi anaa dua ayɛ nso, montew ho.”+ 21 Afei ɔsɔfo Eleasar ka kyerɛɛ asraafo a wɔkɔɔ ɔko no sɛ: “Mmara a Yehowa de maa Mose ni, 22 ‘Sika, dwetɛ, kɔbere, dade, sanyaa, ne sumpii, 23 ne ade biara a ebetumi afa ogya mu+ no, momfa mfa ogya mu mma ɛho ntew. Nanso ɛsɛ sɛ mode ahodwira nsu no nso tew ho.+ Na ade biara a entumi mfa ogya mu no, momfa mfa nsu no mu.+ 24 Na da a ɛto so ason no monhoro mo ntade na mo ho ntew ansa na moaba nsraban no mu.’”+ 25 Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: 26 “Wo ne ɔsɔfo Eleasar ne agyanom fie mpanyimfo no mmu nea wɔde fi ɔko no mu bae nyinaa ano, nnipa ne mmoa nyinaa. 27 Afei monkyɛ asade no mu abien mma wɔn a wɔkɔɔ ɔko no ne asafo no mufo a wɔaka.+ 28 Na gye mmarima a wɔkɔɔ ɔko no hɔ tow+ ma Yehowa. Nnipa ne anantwi ne mfurum ne nguan ahanum biara, gye mu ɔkra biako. 29 Wɔn kyɛfa a wonyae no bi na gye ma ɔsɔfo Eleasar sɛ ntoboa ma Yehowa.+ 30 Na ɔfã a ɛkɔɔ Israelfo a wɔaka no hɔ no, gye nnipa ne anantwi ne mfurum ne nguan aduonum biara mu biako ma Lewifo+ a wɔyɛ Yehowa ntamadan no ho adwuma+ no.” 31 Mose ne ɔsɔfo Eleasar yɛe sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ. 32 Asade a dɔm no fae no nkae nyinaa ano si nguan mpem ahansia aduɔson anum, 33 ne anantwi mpem aduɔson abien, 34 ne mfurum mpem aduosia biako. 35 Na nnipa akra,+ kyerɛ sɛ mmea a wonhuu ɔbarima da+ no, dodow si mpem aduasa abien. 36 Bere a wɔkyɛɛ nguan no mu no, dɔm a wɔkɔɔ ɔko no nyaa mpem ahasa aduasa ason ne ahanum. 37 Tow+ a wotua maa Yehowa no ano si nguan ahansia aduɔson anum. 38 Anantwi a wonyae ano si mpem aduasa asia, na woyii mu aduɔson abien sɛ tow maa Yehowa. 39 Mfurum a wonyae ano si mpem aduasa ne ahanum, na woyii mu aduosia biako sɛ tow maa Yehowa. 40 Nnipa a wonyae ano si mpem dunsia, na woyii wɔn mu akra aduasa abien sɛ tow maa Yehowa. 41 Na Mose de tow a woyii sɛ Yehowa ntoboa no maa ɔsɔfo Eleasar,+ sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ.+ 42 Bere a Mose kyɛɛ asade no mu de asraafo no kyɛfa maa wɔn no, ɔfã a ɛkɔɔ Israelfo no hɔ ni: 43 Nguan a Israelfo a wɔaka no nyae yɛ mpem ahasa aduasa ason ne ahanum, 44 anantwi mpem aduasa asia, 45 mfurum mpem aduasa ne ahanum, 46 ne nnipa akra mpem dunsia. 47 Na nnipa ne mmoa a Israelfo nyae sɛ wɔn kyɛfa no, Mose gyee aduonum biara mu biako maa Lewifo+ a wɔyɛ Yehowa ntamadan no ho adwuma+ no, sɛnea Yehowa hyɛɛ Mose no pɛpɛɛpɛ. 48 Na mpanyimfo a wɔdeda asraafodɔm ano,+ apem apem ne ɔha ha so ahwɛfo+ no, kɔɔ Mose nkyɛn, 49 na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nkoa akan asraafo a wɔhyɛ yɛn nsa no, na wɔn mu biako mpo nyerae.+ 50 Enti ma yɛn mu biara mfa nea wanya mmra sɛ Yehowa ayɛyɛde,+ biribiara a wɔde sika ayɛ, nankɔn so nkawa, nsa so nkapo, pɛtea,+ asomuade, ne mmea agude+ biara. Na wɔmfa eyinom mpata mma yɛn kra wɔ Yehowa anim.” 51 Enti Mose ne ɔsɔfo Eleasar gyee+ sika ne agude a wɔde bae no nyinaa. 52 Na sika a apem apem ne ɔha ha so ahwɛfo no de maa Yehowa sɛ ntoboa no nyinaa ano si nnwetɛbona mpem dunsia, ahanson aduonum. 53 Ná asraafo no mu biara afa afowde no bi.+ 54 Enti Mose ne ɔsɔfo Eleasar gyee sika a apem apem ne ɔha ha so ahwɛfo no de bae no, na wɔde baa ahyiae ntamadan no mu sɛ nkae ade+ ma Israelfo no wɔ Yehowa anim.